Taratasim-baovao RV: efa vonona ny “State of the Internet’s Languages” [Toe(t)ran’ireo fiteny an’aterineto] · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2022 4:13 GMT
Fandravahana avy amin'i Maggie Haughey ao anatin'ny tatitra Toetran'ny Aterineto navoakan'i Whose Knowledge?, Oxford Internet Institute, sy ny Centre for Internet and Society. Zavakanto vonona araka ny lisansa CC NC-SA 4.0.
Naotin'ny Rising Voices: Ny taratasim-baovao mivoaka isam-bolana dia manome ny fehin'ireo ranty blaogy navaoakanay vao haingana momba ireo endrika rehetra amin'ny fampiatiana ankihy ka ao anatin'izany ny fidirana sy ny fandraisana ireo fitaovana ankihy, sy ireo karazana fomba sy hirika ahafahan'ny vondrom-piarahamonina mandray anjara feno an-jotra. Vakio ato ireo famoahana efa nivoaka amin'ity taratasim-baovao ity.
Mariho koa ireto fandikanteny ireto: digital=numerique=ankihy, online=an-jotra na an-tserasera
Nanao ahoana ianareo izay ry mpamaky hajaina tamin'ity volana marsa ity?
Mientanentana izahay hizara aminareo ny tatitra nivoaka vao haingana momba ny State of the Internet’s Languages [Toetran'ireo fiteny an'aterineto], novokarin'ny Whose Knowledge?, Oxford Internet Institute [Ivotoerana Aterineto Oxford], sy ny Centre for Internet and Society (India: Foibe ho an'ny aterineto sy ny fiarahamonina). Natao izao ezaka ifarimbonana izao no hamaliana fanontaniana iray lehibe: Fiteny firy, amin'ireo rehetra eto an-tany, no azontsika iainana feno an-jotra?
Te-hahafantatra hoe hatraiza ny fijoroan'ireo fiteny anjotra androany? Andao hiara-hanavatsava aminay hijery ireo tsikaritra!
* Ny tatitra moa dia vonona amin'ny fiteny Bahasa Indonesia, Bengali, Dill Wlhall, Anglisy, Espaniola, Swahili, ary Paortiogey.
Miantsambo amin'ny dia IDIL2022–2032 ahitana ireo mpikatroka ara-piteny manerana izao tontolo izao, mitondra ity andiam-pifandimbiasam-panentanana amin'ny Twitter hafa ity indray ny Rising Voices sy ny mpiara-miombon'antoka aminy. Te-hiherika kely any amin'ireo fitenin'ny indizeny, vitsy an'isa, tandindonim-paharinganana na tsy ampy votoaty-fitaovana sy ny anjara toeran'ny aterineto sy ny teknolojia amin'ny fampiroboroboana ireny sy ny fameloma-maso azy ireny indray? Andao zohio izahay ary henoy izay zavatra tian'ny vahininay hozaraina amintsika!
Rayo Cruz [es] momba ny fiteny Zapotec, iresahana any Sierra Norte ao Oaxaca, Meksika
Miriam Hernández [es] momba ny Ch'ol, fiteny Mayana iray, iresahana ao Meksika
Yajaira Martínez [es] momba ny fiteny Mazatec, iresahana ao Meksika
Ao amin'ity lohahevitra ity, tianay ny hitondra anao ho ao Bolivia sy hijery ny fiarahan'ny tobim-pampielezam-peom-piarahamonina handravona ny fiitaran'ny hantsana eo amin'ny fanabeazana an-tsekoly an-tanandehibe sy ambanivohitra, noho ny valan'aretina. → “Radio fanabezana vondrom-piarahamonina: fomba fampianarana hafa ao anatin'ny hantsana ankihy” [mg]
Mandritra izany fotoana izany, manana mitovy endrika aminy amin'ny fiteny maro ankehitriny ny kilalaom-boambolana Wordle! Azonao atao sary an-tsaina ve ny fahafinaretana milalao azy amin'ny fiteny Cornish, Gitksan, Fitenin'ny moana Amerikana, ary… Klingon? → “‘Your’dle: vonona amin'ny fitenin'ny maro amin'izao tontolo izao ankehitriny ny Wordle”
FANOHANANA | FIZAKANA
Averina indray, manitatra izay zakainy handrisihana ireo Eoropeana mpamokatra handray anjara amin'ny tetikasam-pampahalalàna (projet documentaire) avy amin'ny mpanatontosa filma mifototra amin'ireo firenena voafantina [tafiditra i Madagasikara] ankehitriny ny IDFA Bertha Fund. Liana amin'ny fitondrana ny tantaranao ho an'ny mpijery manerantany? Hitanao ato ny antsipiriany bebe kokoa. Fametrahana hatramin'ny voalohany avrily 2022.
Irinao ve ny hitatitra ireo tantara tsy misy mpiresaka avy aty amin'ny ilabolantany atsimo nefa tsapanao fa mila tari-dalana ianao amin'ny fanatanterahana ny tetikasanao? Mety ho vahaolana ho anao ny One World Media Fellowship. Azonao jerena ato ny antsipiriany bebe kokoa sy ny fepetra takiana ho voafantina amin'izany. Fara-fametrahana fangatahana: 29 marsa 2022 amin'ny 5 ora hariva (UTC)
Roa taona izay no lasa fa mbola mihelingelina ambonin'ny lohantsika (sy ny saintsika) ny valan'aretina COVID-19 . Ho an'ny vondrom-piarahamonina vazimba teratany, tsy ahiahy vaovao fotsiny no entin'izany fa vao mainka ilay izy mampitombo ny hantsana amin'ny lafiny maro. Ny MIT SOLVE ankehitriny dia miantso ireo vazimba teratany mpamorona ao Etazonia hahazoana vahaolana momba ireo fanamby mivaivay ireo. Te-handray anjara ve ianao? Mba tadiavo ato ny antsipiriany azafady. Fara-fametrahana fangatahana: 31 marsa 2022
HAFA HOVAKIANA, HOJERENA ary HOHAINOANA
Speaking up in defense of language rights ao amin'ny ROAR
How to implement inclusive web practices for people with speech & language disorders ao amin'ny InclusionHub
Language builds legacies: Historical picks from the Mother Tongue Film Festival ao amin'ny Folklife
Mamandriha taratasim-baovao Rising Voices
Ankasitrahana i Eddie Avila sy i Ameya Nagarajan tamin'ny fandraisana anjara tamin'ity taratasim-baovao ity.